Iza moa izahay - Cannapresso Health Inc
Harato V +
CANNAPRESSO dia tsy manam-paharoa ny marika ara-voajanahary hemp CBD vokatra avy amin'ny California, fanatitra avo mifantoka CBD homarinana avy amin'ny indostria hemp, izay ara-dalàna amin'ny fanjakana rehetra 50.
Hitsabo tena ho faran'izay tsara CBD vokatra avy amin'ny CANNAPRESSO, ary finaritra satria fantatrareo fa ianareo dia mampiasa voajanahary rehetra-Cannabidiol vokatra, nalaina tamin'ny alalan'ny simika-maimaim-poana ny dingana CO2 izay manala loto sy metaly mavesatra, raha ho malefaka ny Eco-rafitra. Andramo zavatra hafa miaraka amin'ny maneran-isan-karazany samy hafa CBD vokatra raha mbola tantalize ny tsirony-hitsimoka amin'ny matsiro tsirony safidy!
Afaka matoky CANNAPRESSO mba hanome anareo ny marina habetsahan'ny avo-tsara CBD menaka matsiro Nafangarony amin'ny safidy izay mifanaraka ny fomba fiainantsika. CANNAPRESSO tsirairay dia mitondra vokatra fanomezan-toky ny toetra antoka fa ny Cannabidiol dia laboratoara-fitiliana ary nanao eto, any Etazonia.
Address: 202 North California Ave, City ny Indostria CA 91744 USA
Raha toa ka manana fanontaniana mikasika ny entana sy ny vokatra vidin-javatra, azafady mamela ny hafatra etsy ambany, dia mamaly ao anatin'ny 24 ora
FDA Disclosure : Ireo vokatra sy ny fanambarana tsy mbola fizahana ny FDA ary tsy natao hamantarana, hitondra, hanasitrana na manakana toe-javatra rehetra, fikorontanana, aretina, na ara-batana na ara-tsaina toe-javatra. Ity vokatra dia tsy mivoa-tsetroka fampitsaharana vokatra ary tsy notsapaina ho toy izany. Tsy ny FDA fizahana ny fiarovana ity vokatra na ny filazana atao amin'ny ny mpanamboatra. Vokatra ity dia natao ho fampiasana amin'ny olona ny ara-dalàna taona no ho miakatra, fa tsy amin'ny zaza, na ny vehivavy bevohoka na izay tratrany sakafo, jereo foana amin'ny dokotera alohan'ny sakafo manomboka vaovao fanampin fandaharana.
Legal Disclaimer : CANNAPRESSO tsy ORINASA MPANAMBOATRA, mivarotra na mizara izay vokatra izay ao amin'ny fanitsakitsahana ny United States maso akora Act (US.CSA). Cannabidiol (CBD) dia voajanahary hemp-panorenana ny menaka.
Tsy natao hamidy amin'ny olona latsaky ny 18